Akwụkwọ egwuregwu kacha mma
Akwụkwọ basketball 3 kacha mma
N'ebe a, ihe nkesa bụ otu n'ime ndị, dị ka nwatakịrị, na-anọ ọdụ na-ekiri egwuregwu NBA nke Ramón Trecet kwuru. Ndị ahụ bụ ụbọchị Michael Jordan, nke Ime Anwansi Johnson, nke Stockton na onye ozi akwụkwọ ozi Malon, nke ụmụ nwoke ọjọọ nke Philadelphia, nke Dennis Rodman na ngabiga ha, nke…
5 akwụkwọ bọọlụ kacha mma
Ekwula m ihe karịrị otu ugboro na ihe m agaghị abụ ịgba bọọlụ, opekata mpe ọ bụghị site na amara. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe dị ka afọ 10 ma ọ bụ 11, achọpụtara m na bọọlụ na akwụkwọ nwekwara ike inwe ebe nzukọ. ...
Ikuku. Akụkọ Michael Jordan nke David Halberstam dere
Site na '' ụtụ '' Netflix nye onye nọ ma bụrụkwa onye egwuregwu mgbasa ozi kachasị n'ụwa, Michael Jordan, onye bụ onye na -enwe mmasị na nwata (ya na mgbagwoju anya nke akụkọ ifo n'oge ọ bụ nwata) na -achọpụta na oge oge adịghị eme ebere, ọkachasị na ncheta. . Mmetụta ...
N'okpuru hoop, nke Pau Gasol dere
Ọ dị mgbe m loro egwuregwu NBA niile Ramón Trecet na -agbasa na abalị Satọde maka TVE. Ma eleghị anya, agbanyeghị ụdọ agbụ ...
A Natural Talent, nke Ross Raisin dere
Ọ dịghị mma mgbe niile ime ihe ndị ọzọ chọrọ maka onwe gị. Mgbe ị nwere ike ịdaba n'ọnwụnwa dị ize ndụ nke ime ka ị bụ ihe ndị ọzọ na -atụ anya ka ị bụrụ, karịa na onye ị bụ n'ezie ma ọ bụ mkpa, ị na -eche ihe egwu ihu. Ihe atụ nke ...
Ụgha Nine, nke Philip Kerr dere
N'egwuregwu bọọlụ, a ka nwere okwu na -atụ aro n'etiti ike ọgwụgwụ nke hackneyed na ịgba akwụkwọ ọkọwa okwu. Ọ bụrụ na anyị enyocha okwu ahụ bụ "ụgha itoolu", karịa ihe ọ pụtara na ọkwa ahịhịa, anyị na -ahụ nkọwa nkọwa na -enweghị atụ na edemede na ọbụlagodi na nke nkà ihe ọmụma. Ewepụtara na ihe ọ bụla ...
Otu anyị siri ruo Wembley Final, nke Joseph Lloyd Carr dere
Ọmarịcha egwuregwu kacha mma bụ nke na -ewetara anyị obere David na -achọ iweda Goliath onye aghụghọ. N'adịghị ka ihe na -eme n'eziokwu, egwuregwu asọmpi dị ka bọọlụ bụ nke a na -enyekarị ndị isi nzuzu a nke na -eme ka obere ahụ nọrọ nso ...
Ọ dị mma, Vicente Calderón, nke Patricia Cazón dere
Ka anyị bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụrụ na enwere akụkọ klọb akụkọ ifo kacha mma na Spain, nke ahụ bụ Atlético de Madrid. Edebere akụkọ ifo site na mmeri megide ahụhụ na site na hel mgbe ọdachi dakwasịrị. Nke a bụ naanị ụzọ iji nweta otuto na ihe so ya: akụkọ ifo. ...
Ndị isi, nke Sam Walker dere
Obi abụọ adịghị ya na ọnụọgụ na ọnụ ọgụgụ bụ mmalite maka ịtụle otu egwuregwu kacha mma na ọzụzụ ọ bụla. Ihe kachasị mma n'egwuregwu ọ bụla bụ ọnụ ọgụgụ na -arụ ọrụ mmadụ. Na otu arụmọrụ mmadụ ahụ bụ ihe na -akpalite ihe niile iji nweta ...
Mmeri ma ọ bụ Mụta, nke John Kavanagh dere
Ọ nwere ike tufuo ya, mana ozugbo a ga -atụgharịrịrị echiche ahụ ka ọ banye n'ime ma tụgharịa onyinyo mmeri dị ka mmụta. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ aha na -aga nke ọma maka akwụkwọ ọgụ, mana a na -atụgharịrị ya n'ọhịa ọ bụla. Njikọ m na mgba dịka egwuregwu sitere n'akwụkwọ ...